I-Straumen Sea View - I-Magicctic Escape - I-Airbnb
I-Straumen Sea View - I-Magicctic Escape
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguFinn Olav
UFinn Olav yi-Superhost
Singabanikazi abazidlayo ngale ndlu yamaplanga ikhethekileyo ekwindawo ephambili elwandle.
Ikhitshi lale mihla elinento yonke negumbi lokuhlala elihonjiswe kakuhle neefestile ezinkulu ezijonge elwandle.
Indlu yamaplanga inazo zonke izinto oza kuzidinga kwaye igumbi lokuhlambela linendawo evulekileyo yokubeka amanzi neshawa enkulu.
Umatshini wokuhlamba impahla/umatshini wokomisa izitya nowokuhlamba izitya uyafumaneka ibe ungasetyenziswa ngokukhululekileyo.
Indlu yamaplanga ikwindawo ethe cwaka kufutshane nolwandle. Le ndawo yindawo efanelekileyo ukuba ufuna ukonwabela ukuzola kwendalo. Ikwayindawo entle kakhulu yokuqala kwabo bafuna ukubuka isiqithi kunye neentaba ehlotyeni nasebusika.
Esi siqithi sineentaba ezininzi eziziimitha ezingaphezu kweziyi-1000 kwaye sineyona ntaba iphakamileyo eNorway nakwesiphi isiqithi, iLangelitind iimitha eziyi-176 ngaphezu kolwandle. Kukho iindlela ezininzi eziphawuliweyo zokunyuka intaba onokuzisebenzisa ukuba awaziwa kule ndawo.
Kukho izikhephe zokuloba eziqeshisayo e-Ngenes eyindawo entle yokuqala kwabo bafuna ukuloba elwandle.
Ukuba ufuna uxolo, ukukhululeka, ukuzola, indalo nendawo entle yokuhlala eArctic, ungabi sakhangela kwenye indawo, kuba usandul 'ukuyifumana.
46" HDTV ene-I-Chromecast, izitishi zeTV eziqhelekileyo
Indlu yamaplanga ikwindlela efileyo engenazithuthi. Yindawo ethe cwaka kakhulu apho unokuthi cwaka khona ukuba kunqwenelekile. Isandi samaza olwandle siza kuba sesona sandi siphambili kwindlu yamaplanga.
Umbuki zindwendwe ngu- Finn Olav
Umbuki zindwendwe uyafumaneka ngefowuni, ngeSMS okanye ngeimeyile ngalo lonke ixesha.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Engenes